Imfundo – Android – Vessoft
I-Google Humusha – umhumushi odumile ngokuxhaswa kwezilimi eziningi ezivela kwensiza yakwaGoogle. Isoftware ivumela ukuhumusha umbhalo usuka ezithombeni futhi kubhalwe ngesandla nokufakwa kwezwi.
Isicelo official ukubuka encyclopedia ulwazi kunayo yonke emhlabeni. Isofthiwe kwenza ukufunda izihloko ngezilimi ezahlukene futhi sabelane ulwazi ngokusebenzisa ezinye izicelo.
Mova – isofthiwe yokuthuthukisa ulwazi lolimi lwase-Ukraine. Isoftware iqukethe imithetho emifushane eminingi kanye nomtapo wezincwadi omkhulu wokuzivocavoca okuthakazelisayo nezincazelo.
IBusuu – indlela ethokozisayo yokufunda noma yokuthuthukisa ulwazi lwezilimi zakwamanye amazwe. Isoftware isebenzisa amathuluzi ahlukile wokufunda wokuthuthuka kolimi kusuka ekuqaleni kuya emazingeni athuthukile.